१३ श्रावण २०७८, बुधबार ०८:०८ PM
८ चैत्र २०७७, आईतवार २१:०४ मा प्रकाशित
२०७७ चैत्र ८ आइतबार, काठमाडौं । छिमेकी राष्ट्र भारतमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि नेपालमा पनि त्यस्तो हुन सक्ने भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सावधानी अपाउन आग्रह गरेको छ।
आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले भिडभाड हुने काम नगर्न र जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरेको हो।
देशभर सभा, जुलुस, ¥याली, भेला, जमघट, गोष्ठी, सेमिनार, बैठक, भिडभाड हुने व्यवसाय र काम नगर्न, मास्कको प्रयोग गर्न, भौतिक दूरी कायम गर्न तथा साबुन पानीले हात धुन विज्ञप्तिमार्फत् अनुरोध गरिएको हो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले युरोपेली मुलुकसँगै छिमेकी राष्ट्र भारतमा कोरोना संक्रमण ह्वात्तै बढेको बताउँदै त्यसको असर नेपालमा पनि पर्न सक्ने खतरा रहेकोले सावधानीका उपाय अपनाउन आग्रह गरिएको बताउनुभयो।
नेपालमा पछिल्लो समय कोरोनाको संक्रमण घटेको भए पनि जोखिमको अन्त्य भइनसकेकोले उच्च सावधानी आवश्यक रहेको जनस्वास्थ्यविदहरुले बताएका छन्।
नेपालमै पनि संक्रमणको श्रोत अन्त्य नभएको र छिमेकी मुलक भारतमा दोस्रो लहर सुरु भएपछि जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना अति अनिवार्य रहेको जनस्वास्थ्यविद डा. शरद वन्तले बताउनुभयो ।
उहाँले सीमामा सुरक्षात्मक कडाई गर्न र विदेशबाट आउनेहरुलाई क्वारिन्टिनमा राख्ने वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले कोरोनाको दोस्रो लहर नेपालमा सुरु हुने सम्भावनालाई नकार्नै नमिल्ने बताउनुभयो ।
युरोपमा कोरोना संक्रमण बढेपछि कतिपय देशका विभिन्न शहरहरुमा लकडाउन घोषणा गरिएको छ । छिमेकी राष्ट्र भारतका केही शहरमा पनि कोरोना नियन्त्रणमा लिन लकडाउन गरिएको छ ।
तर नेपालमा तत्काल लकडाउन गरिनेबारे आफूहरुले केही नसोचेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले बताउनुभयो । कोरोना संक्रमणको स्थिति हेरेर नियन्त्रणका रणनीति अपनाइने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम अन्त्य नहुँदै सरकार नै विरोध सभा गर्न सडकमा निस्केको थियो । कोरोना संक्रमणकैबीच हजारौँ जनताहरुलाई सडकमा उतारेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै भाषणा ठोक्नुभएको थियो ।
सरकार र प्रधानमन्त्री नै स्वयं भिडभाडमा उत्रनेपछि त्यसको सिको गर्दै नागरिकहरु कोरोना पूर्वको अवस्थामा फर्कन थालेका थिए ।
तर फेरि आज स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण बढ्न सक्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेपछि नागरिकहरु अन्यौलमा परेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. चन्द्र भण्डारीले अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन जनताबाट पालना हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिने अवस्था नरहेको बताउनुभयो ।
लाखौँ जनतालाई कुस्ती खेल्न सडकमा उतार्ने कम्युनिष्ट सरकारले नियन्त्रणमा आइसकेको कोरोना संक्रमणलाई फेरि भयावह बनाउने खतरा पैदा गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
भारतमा हिजो पछिल्लो चार महिनामा सबैभन्दा धेरै दैनिक संक्रमण पुष्टि भएको थियो । कोरोना खोप अभियान समेत चलिरहेका बेला हिजो एकै दिन झण्डै ४१ हजार भारतीयमा संक्रमण पुष्टि भएपछि नेपालमा पनि दोस्रो लहर सुरु हुन सक्ने खतरा पैदा भएको छ ।
नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भए अवस्था पहिलेको भन्दा भवावह हुन सक्ने भएकोले जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा लापर्वाही नगर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।
केन्द्रिय कारागारमा तीन कैदीकाे मृत्यु, एक मृतकमा काेराेन�